WAKANAKA 2020, Mhoro 2021
Gore risingakanganwike, magumo anoshamisa, anoshamisa 2021 Bangni Chitubu Mutambo Gala yakabatwa zvakabudirira, kupera 2020 uye kutanga 2021! `` Kuda Bangni, hope dzeramangwana '' pakutanga kwechiitiko, VaDavid vakapa hurukuro, vachitenda vashandi vega veBangni ...
Bangni pasa ISO 13485 odhita
Izvo zvakanaka kukuudza iwe kuti isu tinongopfuudza iyo ISO 13485 odhita. Iyo ISO 13485 standard ndiyo inogamuchirwa pasirese uye yakashandiswa chiyero chehunhu manejimendi sisitimu uko sangano rinoda kuratidza kugona kwayo kupa zviyero zvekurapa uye zvine hukama masevhisi ayo ...
Insoles inobatsira sei?
Chii chinonzi orthotic insole kana orthotic insert? Orthotic insole imwe yemhando insole iyo inobatsira vanhu kumira zvakanaka, kumira yakatwasuka uye kumira refu. Vanhu vazhinji vanogona kufunga kuti orthopedic insoles ndeyevanhu vane hunyanzvi. Asi chokwadi ndechekuti vanhu vazhinji vanotarisana nedzimwe tsoka ...
Chii chinonzi insoles chakagadzirwa?
Mufekitori yedu, isu tinopatsanura zvigadzirwa zvedu muzvikamu zviviri zvezvigadziko pane yavo yekugadzira uye yekugadzira tekinoroji. Imwe dept musangano weEVA. Mune ino musangano tinogadzira orthotic insole uye yemitambo insole kazhinji. Zvizhinji zveichi chigadzirwa chinogadzirwa nemhando dzakasiyana dzemafoji togethe ...